Talyaaniga ayaa dalkiisa ka ceyriyay diblomaasiyiin Ruush ah sababo la xiriira basaasnimo… – Hagaag.com
Talyaaniga ayaa dalkiisa ka ceyriyay diblomaasiyiin Ruush ah sababo la xiriira basaasnimo…
Posted on 31 Maarso 2021 by Admin in World // 0 Comments
Wasiirka Arimaha Dibada ee Talyaaniga Luigi Di Maio ayaa sheegay maanta oo Arbaco ah in Rome ay go’aansatay in ay erido diblomaasiyiin Ruush ah sababo la xiriira kiis basaasnimo “aad u culus”.
Subaxnimadii hore, Wasaaradda Arimaha Dibada ee Talyaanigu waxay sheegtay inay u yeedhay safiirka Ruushka ee Rome ka dib markii ay booliisku ku dhawaaqeen inay xidheen sarkaal Ruush ah oo safaarada ka shaqaynayay iyo sarkaal ka tirsan ciidamada badda ee Talyaaniga iyagoo ku dhex jira basaasnimo, iyagoo ay isweydaarsanayeen dukumiintiyo sir ah oo lagu bedelanayey lacag.
Qoraal ka soo baxay wasaarada arimaha dibada ayaa lagu sheegay in danjire Sergey Razov looga yeeray wasaarada kadib codsi ka yimid wasiirka arimaha dibada Di Maio, kadib markii booliska ay shaaciyeen in ciidamada amaanka ay xireen sarakiil ka tirsan Talyaaniga iyo Ruushka fiidnimadii talaadadii.
Booliska ayaa sheegay in sarkaalka Talyaaniga ah – oo ahaa taliyaha mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee Talyaaniga – iyo sarkaalka militariga Ruushka lagu eedeeyay “dambiyo culus oo la xiriira basaasnimo iyo amniga dalka.”
Dhinaca kale, Moscow waxay muujisay sida ay uga xun tahay go’aanka Rome ay ku ceyrisay diblomaasiyiinta, Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay xaqiijisay in jawaabta Ruushka gadaal laga soo sheegi doono.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa u aragtay in cayrinta diblomaasiyiinta aysan u dhigmin heerka xiriirka Ruushka iyo Talyaaniga.
Dhinaca kale, Guddiga Arimaha dowliga ee golaha Duma ee Ruushka ayaa wuxuu sheegay in Moscow ay ka bixin doonto jawaab taasi la mid ah.
Kani ayaa ah kiiskii ugu dambeeyay ee dacwado basaasnimo ah oo ay wadammada Yurub ka keeneen Ruushka bilihii la soo dhaafay, Bulgaria ayaa waxay dhawaan erisay saraakiil Ruush ah oo lagu eedeeyay basaasnimo, Holland-na way ka sii horeysay bishii December ee la soo dhaafay.